Nagu saabsan - Linyi Juda Sayniska iyo Teknolojiyada Ilaalinta Deegaanka ee injineernimada Co., Ltd.
Linyi Juda sayniska iyo teknoolojiyada ilaalinta deegaanka ee injineernimada co., Ltd. waa warshad leh taariikh ka badan 30 sano, inta badan waxay ku hawlan tahay ilaalinta bey'ada toosan ee ilaalinta deegaanka, qalabka taageerada foornada foornada, qalabka ka saarida boodhka ee deegaanka iyo nidaamka xakamaynta otomaatiga ah, iwm.
Shirkaddayadu waxay ku guuleysatay kalsoonida inta badan macaamiisha iyada oo loo marayo nidaamka naqshadeynta qumman, alaabada asaasiga ah ee wanaagsan, dhismaha xoogga leh iyo awoodda wax soo saar, tayada injineernimada lagu kalsoon yahay, heerka sare ee adeegga iyo waxqabadka wanaagsan. Intaa waxaa sii dheer, shirkaddu waxay leedahay awood farsamo oo xoog leh, oo leh koox aqoon sare u leh naqshadeynta foornada iyo dhismaha, rakibidda qalabka farsamada, nidaamka xakamaynta otomaatiga ah ee tooska ah iyo dhinacyada kale ee gaadhitaanka qoto dheer ee injineernimada iyo shaqaalaha farsamada.
Waxaan bixinnaa adeegyo kaladuwan oo buuxa oo ah naqshadeynta guud ee dhismaha, dhismaha mashruuca, naqshadeynta qalabka farsamada iyo soo saarista, illaa heer buuxa oo ah qaabeynta nidaamka xakamaynta kiimikada otomaatiga ah, rakibaadda goobta iyo hawlgalinta, tababarka shaqaalaha farsamada, iyo sidoo kale dayactirka qalabka.
Iyada oo ku saleysan hormarinta faa'iidooyinkayaga khadka soosaarka lime, waxaan si firfircoon u keennaa tikniyoolajiyad sare oo cusub waxaanan soo saarnay qaabab nuurad cusub oo lime ah sida kilkiillada leh gaaska shidaalka. Horumarinta dhaqaalaha adduunka, dowlado badan ayaa kordhiyay maalgashiga kaabayaasha. Xaaladahaas oo kale, waxaan si buuxda uga faa'iideysaneynaa fursadda wanaagsan. Waxaan fiiro gaar ah siineynaa soosaarka lime dhaqsaha farsamo hagaajinta, oo waxaan isku dayeynaa sida ugu fiican inaan horumar weyn ka gaarin isbadalka farsamada, hal abuurka, iyo hagaajinta tayada farsamada wax soo saar; dhamaanteenna waxaan diyaar u nahay inaan u fidino macaamiisha adduunka oo idil qalab aad u fiican iyo farsamo iyo adeegyo cod. Tan iyo aasaaskii, waxaan aaminsanahay in tayada ay tahay nolosha warshad, macaamilkuna uu yahay Ilaah. Waxaan ku adkeysaneynaa inaan u fidino macaamiisheenna tayo wanaagsan, qiimo dhexdhexaad ah iyo adeeg dhawaq leh. Farsamooyinkeena wax soo saarna waxaa loo soo bandhigayaa in ka badan 10 dal. Waxaan ku adkeysan doonnaa soo saarista alaab aad u wanaagsan, waxaanna siineynaa adeegga ka dambeeya iibinta dhammaan macaamiisha sidii caadiga ahayd
Si diiran u soo dhaweyso macaamiisha dal iyo dibadba inay soo booqdaan shirkadeena!
Kaalshiyamka Kaalshiyamka iyo Kaalshiyamka hydroxide, Magaca Ganacsiga ee Kaalshiyamka Kaalshiyamka, Qalabka Khadka Kaalsiyam Hydrokside Line, Qalabka Kaalsiyam Hydrokside, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide,